လေနုအေး: ရေကြည်၊ မြက်နု
Posted by တန်ခူး at 2:36 PM
အဲဒီလို ကိုယ့်ရေကိုယ့်မြေကို ပြန်ချင်တဲ့စိတ်၊ အေးအေးလူလူနေချင်တဲ့ အတွေးက ကျနော့်ခေါင်းထဲလည်း မကြာခဏ ရောက်တယ်တန်ခူးရေ။
ဘယ်လောက်အထိများလဲဆိုရင် မုန်းချောင်းမှာဖြစ်ဖြစ်၊ ဧရာဝတီမြစ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် ဟိုဘက်ကမ်းနဲ့ ဒီဘက်ကမ်း လှေပို့စားတဲ့ လူတောင်ပြန်လုပ်ချင်တဲ့စိတ် မကြာခဏ ဖြစ်တယ်။ လှေကောင်းကောင်းတစင်းဝယ်ဘို့တော့ ကျနော့်မှာ စုငွေ အလုံအလောက်ရှိပါတယ်။ သင်ထားတဲ့ ပညာတွေမှ အားမနာလို့ ပြောကြမယ်ထင်ပါရဲ့။
မနက်စာစားရင် ထမင်းကြမ်းခဲနဲ့ ငပိဖုတ်။ ကျန်တဲ့ ထမင်းဟင်းကလည်း အသီးအရွက် ပြွမ်းတဲ့ ထမင်းဟင်း။ ငယ်ငယ်ကလည်း ဒီလိုစားလာခဲ့တာဘဲ။
အခုလက်ရှိဘ၀က ၀င်ငွေပုံမှန်နဲ့ အစားအသောက်ကောင်းကောင်းနေ့တိုင်းစားနိုင်ပြီး လူတန်းစေ့ နေနိုင်တဲ့ဘ၀တော့ မှန်ပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် လူ့ဘ၀ရဲ့ အနှစ်သာရ (Quality of life) က အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ လှေသမားရဲ့ ဘ၀လောက် ကောင်းပါ့မလားလို့ တွေးနေမိတယ်။
မနက်ဖြန်တွေကို ရှည်ရှည်ဝေးဝေး စဉ်းစားမနေဘူး။ လက်ရှိဘ၀မှာဘဲ နေထိုင်တယ်။ လေကောင်းလေသန့်ရမယ်။ အသီးအရွက်တွေ လတ်ဆတ်တယ်။ လှေလှော်နေတဲ့အတွက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးသားဖြစ်တော့ ကျစ်လစ်သန်မာနေမယ်။
ကျနော့်မိန်းမက လှေဆိပ်မှာ အကြော်ရောင်းမယ်…(မဒမ်ပေါ် အကြော်ဆိုင်ပေါ့)။ သမီးက ကျောင်းပိတ်ရက် လှေပေါ်မှာလိုက်ပြီး လှေစီးခ ကောက်မယ်။ ရေပက်ခွက်ကိုင်ပြီး ရေပက်ပေးမယ်။
ကျနော်ငယ်ငယ်က မုန်းချောင်းမှာ ရေသွားဆော့ရင် အဲသလိုဘဲ လှေသမားကြီးဆီက ခွင့်တောင်းပြီး လူတွေကို ကြိုပို့လုပ်ပေးရာ ပျော်စရာအရမ်းကောင်းတယ်။ လေတိုက်တဲ့အခါဆို ရွက်ကလေးဖွင့်ပြီး ပဲ့ကိုင်လိုက်သွားရုံဘဲ။ လှိုင်းတွေက လှေဦးကို တဗျတ်ဗျတ်လာရိုက်နေသံကို စည်းချက်မှန်မှန်ကြားရတယ်။
ဧရာဝတီမြစ်ပြင်မှာဆို မြစ်ပြင်က ဖြတ်တိုက်လာတဲ့ လေကလေးဟာ အရမ်းကို အေးမြပြီး လတ်ဆတ်တာဘဲ။
နအဖ ပြုတ်တာနဲ့ မြန်မာပြည် ပြန်တော့မယ် စိတ်ကူးတယ်။ လှေသမားမဟုတ်တောင် တခြားတခုခု လုပ်ကိုင်စားသောက်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ နေချင်တော့တယ်။
ပျော်အောင်ဘဲနေပါတန်ခူးရယ်...တော်ရာနဲ့ ပျော်ရာ တထပ်ထဲကျနေတယ်လို့ဘဲစိတ်မှာမှတ်ရင်း ချစ်တဲ့သားလေးနဲ့တန်ခူးချစ်တဲ့မောင်..အားလုံးပျော်တဲ့ အရပ်လေး တော်အောင်ကြိုးစားပါ.....
This is life, ama.
Everyone wants all good things. However, everyone got undesired things.
But, we can find good things and satisfy our life .
This is the best way for life I think.
Please be satisfy our life even bad things we got.
တန်ခူးရေ.. ရေခြားမြေခြားရောက်နေတဲ့သူတိုင်း အခုလိုအဖြစ်မျိုးကြုံနေရတယ်နော်။ ကိုယ်တိုင်လည်းအဲဒီလိုပဲ ခံစားရတာမို့ အိမ်ပြန်ပြေးချင်စိတ်ခဏခဏဖြစ်မိတယ်။ ကိုယ်ချင်းစာတယ်။
ရေကြည်ရာ မြက်နုရာကလည်း ပျော်စရာမကောင်းဘူးဗျာ။
တန်ခူးပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး ငိုင်သွားပြီ။
ထွက်လာခါစကတော့ အလွန်ဆုံး ၅ နှစ်ပေါ့။
ခုထိလည်း အနီရောင်စာအုပ်လေးကို သံယောဇဉ်ကြီးစွာ တွယ်ဖက်ရင်း အချိန်တန်ရင် အိမ်ပြန်မှာလို့ပြောနေဆဲ။
ဘယ်တော့ အချိန်တန်မှာလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းအတွက် ကတော့ အဖြေမရှိသေး...။
ပြန်ချင်တယ်။ အခုအချိန်အထိ မျှော်လင့်ချက် တဲတဲလေးနဲ့ အားတင်းထားရတုန်း။
ကိုပေါရေ…ကျွန်မရေးခဲ့ဘူးတဲ့ “စိတ်ကူးထဲက အိမ်ကလေး” postလိုပါပဲ…တခါတခါ လောဘနည်းတဲ့ ရိုးစင်းတဲ့ဘ၀လေးဆီ သွားချင်တယ်…ဘာမှမသိခြင်းကလဲ ငြိမ်းချမ်းခြင်းတမျိုးပေါ့…အဲဒီအခါကျ မဒမ်ပေါအကြော်လေးနဲ့ထမင်းကြမ်းလေးစားရင်း ကိုပေါလှေကလေးစီးပြီး မုန်းချောင်းထဲလျှောက်လည်…သမီးလေးကို တန်ခူးရဲ့ မောင်ဖွင့်တဲ့ အခမဲ့ကျုရှင်ကို လာတတ်ခိုင်းနော်..တန်ခူးခြံလေးထဲက ဟင်းသီးဟင်းရွက်လေးတွေလဲ အားပေးဦး…
နှင်းပန်းရေ…တော်တဲ့အရပ်မှာပျော်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာလဲ ကြာပေါ့…ပျော်တဲ့အရပ်တော်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလဲ ကြာပေါ့….
နုရေ…ဘ၀တူတွေမို့ စာနာနားလည်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ…
ရေကြည်ရာ မြက်နုရာကြီးက တခါတခါ ရူးချင်စရာတောင်ကောင်းသေးတယ် ကောင်းကင်ကိုရေ…
ပန်ရေ..မျှော်လင့်ချက် တဲတဲလေးကို ပြတ်ထွက်မသွားအောင် အားထုတ်ရတာ လက်ပန်းတွေလဲကျလို့ ……